प्रेमील मनहरुको वहुआयामिक दिन – Rajmarg Online
प्रेमील मनहरुको वहुआयामिक दिन
भेलेनटाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस ! मनदेखि मन जोड्ने अनि जिन्दगीका वहुआयामिक पलहरुलाई सार्थक बनाउनका लागि वाचा कसम खाने दिन ! आजको दिनलाई प्रेमील मनहरुले विशेष दिनकारुपमा लिने गर्दछन् । मन पराएकाहरुले आजकै दिन प्रेम प्रस्ताव राख्छन् । आजको दिन मनको मान्छेसँग भेटिएर आफ्नो गक्ष अनुसारको उपहार दिने, एकअर्का प्रतिको विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउने गरिन्छ । जेहोस्, प्रेम दिवसको महत्व वास्तवमै धेरै नै छ भन्न सकिन्छ ।
समाज विभिन्न विषाक्त सोँचका कारण दिनप्रतिदिन क्रूर, कुरुप बनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सद्भाव, स्नेह, शान्ति, प्रेमको वकालत गर्ने आजको दिनलाई केवल एउटा केटा र केटीबीचको सम्वन्धसँग जोडेर मात्र हेर्नु त्यति उपयुक्त नहोला । आजको दिनलाई सिर्जनशील सोँचहरुमा लिप्त बनाएर समाजलाई सकारात्मक कोणबाट गति प्रदान गर्ने सवालसँग जोड्नु पर्छ । प्रेम अपरिहार्य छ । प्रेम नै जिन्दगी हो । तर पछिल्ला दिनहरुमा प्रेम भन्नासाथ आइलभयू, सेमटूयूको पेरिफेरिमा घुमाएर शरिरको मिलन बिन्दूसँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गरेको सुनिन्छ । जसका कारण प्रेम क्रमशः धोकामा परिणत हुन्छ । अन्तत्वगत्वा त्यसले ब्रेकअपको रुप लिन्छ ।
साथमा बस्न नसक्ने स्थिति आउँदा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छुटिनु ठूलो कुरा होइन । जिन्दगीभरि साथमै रहने योजना बुनेर प्रेम पथमा हिँड्दा समयका डोबहरुले मनसँगको सहकार्यलाई कहिले काँही छुट्ने अवस्थामा पु¥याई दिन्छ । यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । प्रेम बस्दैमा दुबैको जिन्दगी अन्तिम अवस्थासम्म एक हुन्छन्, हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर प्रेमको परिभाषाले जेजस्तो अवस्थामा बसेपनि दुबैलाई सधैभरी खुशी, उमंग, प्रगतिमा लम्कन सक्ने आँट, प्रेरणा दिनुपर्छ ।
साथमा हुँदा आशिष, छुटिदा अभिश्राप दिने मनहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम गरेका हुँदैनन्, न भविष्यमा गर्न सक्छन् । प्रेमको परिभाषा त्याग, समर्पणसँग जोडेर गर्नुपर्छ । नाफा र नोक्सानको हिसाब किताबमा प्रेम पथलाई अगाडी बढाउनु हुँदैन । प्रेमले सधैभरी दिन जानेको हुन्छ । साथमा हुँदा खुशीको भण्डार दिन्छ प्रेमले, दिनुपर्छ । केही समय अलग हुँदा जिन्दगीप्रतिको माया, मोह बढाउने काम गर्छ प्रेमले । कदम कदाचित अलग भैहालेमा पनि साँचो प्रेमले प्रगतिपथमा लम्कनका लागि सदैव उर्जा दिने काम गर्छ, गर्नुपर्छ ।
विशेष गरी प्रेम भन्नासाथ युवा वर्गको पेरिफेरिमा यसलाई बढि मात्रामा जोड्ने गरिन्छ । यो साँचो पनि हो । तर प्रेम युवामा मात्र हुन्छ, आफ्नै तरेलीसँग मात्र प्रेम गरिन्छ भन्ने होइन । प्रेम बृद्धावस्थामा पनि हुन सक्छ । उमेरका हिसाबले कल्पनै गर्न नसक्नेहरु बीचमा पनि प्रेम हुन सक्छ । यसले जातभात, धनिगरिव, गोरो कालो, सुन्दर, कुरुप केही भन्दैन ।
प्रेम मनसँग मन जोडिने प्रक्रिया भएकाले कुनै पनि वाधा, वन्धन, अड्चनको घेराभित्र प्रेम रहँदैन । यसलाई कसैको डर, भय, लोभ, त्राश हुँदैन । साँचो प्रेम कोमल हुन्छ, तर यसको शक्ति यति हुन्छ कि यसले बन्दुकलाई समेत जित्न सक्छ ।
प्रेम अलौकिक छ । मानिस धनपैशा, इज्जत प्रतिष्ठा, पावरको पछि जिन्दगीभरि लागे पनि अन्तिममा मानिसलाई चाहिने प्रेम, अमन, चयन, शान्ति नै हो । प्रेमका अनेक रुप हुन्छन् । उमेर अनुसार प्रेम गर्ने तरिका र शैलि फरक हुन्छ । प्रेमको अर्थ जसले आत्मसात गर्न खोज्छ, सक्छ त्यसले जिन्दगीमा जटिल मोढहरुलाई पनि सजिलै पार लगाउन सक्छ । प्रेमले सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्ने भएकाले साँचो प्रेम गर्ने मान्छे असन्तुष्ट बन्नु पर्दैन ।
प्रेम दिवसकोलाई लिएर विश्वभर विभिन्न खालका वहसहरु चलाइएको छ । यसको उत्पत्तीलाई लिएर आ–आफ्ना तर्कहरु छन् । यसको सुरुवात प्राचिन रोम सभ्यतामै भएको भनिन्छ । त्यस बेलाका सन्त भ्यालेनटाइनको नाममा प्रेम दिवस मनाउन सुरु गरिएका कथाहरु पनि प्रशस्त छन् । जसको नामबाट यो दिनको सुरुवात भएको भएपनि प्रेम दिवसको वहुआयामिक महत्व मनसँग मन जोड्दै सभ्य, समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने कडिसँग जोड्नुपर्छ । प्रेम दिवसको सबैलाई शुभकामना ।